ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-ငါး) – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 21, 2013 November 5, 2021 web_master
ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-ငါး)
စံရှမေောငျ (သို့မဟုတျ) လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး-ငါး)
စဈတှေ ၊ ၂၀ မလေ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ အခနျးဆကျ အတ်ထုပတ်တိ ဆောငျးပါးရှညျ ]
မိမိတို့ပါတီအတှကျ လကျနကျရဖို့၊ နိုငျငံခွားအဆကျအသှယျတှရေဖို့ ကိုယျအမြားကွီး စှနျ့စှနျ့စားစားနဲ့ သှားလာလှုပျရှားခဲ့တယျ။ မအောငျမွငျခဲ့လို့ ဘာမှ လကျဆုပျလကျကိုငျမပွနိုငျပမေယျ့ ကိုယျ့အသကျကို ပဓါန မထားဘဲ သှားလာလှုပျရှားခဲ့တာ အမှနျပဲ။
ပွညျတှငျးက တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ အဆကျအသှယျရအောငျ ကွိုးပမျးခဲ့တာလညျး အကွိမျကွိမျပဲပေါ့။
၁၉၆၃-ခုနှဈ နှောငျးပိုငျးလောကျမှာ ဗကပ၊ ကအေငျ(နျ)ယူ တို့နဲ့ မဒညတ ပွနျလညျတိုးခြဲ့ဖှဲ့စညျးရေးကို မွဈဝကြှနျးပျေါဒသေမှာ သှား ဆှေးနှေးကွတယျ။ (ဆှေးနှေးပှဲတိုငျးမှာ ကိုယျမပါဖွဈခဲ့ဘူး။) မဒညတ ဆိုတာက ဗကပ အပါအဝငျ သူပုနျတှေ ပေါငျးပွီး ဖှဲ့ထားတာ။ အဲသညျမှာ ကိုယျတို့ပါတီက တငျပွတာကို ဗကပ က လုံးဝ လကျမခံဘူး။
ကိုယျတို့တငျပွတာက မဒညတ ကို ပွနျလညျတိုးခြဲ့ဖှဲ့စညျးဖို့ လိုအပျတယျ၊ သဘောတူညီခကျြ တှထေဲမှာ လူနညျးစု လူမြိုးစုတှရေဲ့ ရပိုငျခှငျ့ မပါသေးဘူး၊ လှတျလပျစှာခှဲထှကျပိုငျခှငျ့ အပါအဝငျ ကိုယျပိုငျ ပွဌာနျးပိုငျခှငျ့မူ ကို ကိုယျတို့က တငျပွတောငျးဆိုတယျ။ ဗကပ က လုံးဝ လကျမခံဘူး။ လကျမခံဘူး ဆိုတော့ ကိုယျတို့ ပွနျတာပေါ့။ ဗကပတှေ ပွောတာက တိုးခြဲ့ရေးကို လကျခံတယျ၊ ပွနျလညျဖှဲ့စညျးရေးကို လကျမခံဘူး။ (လူနညျးစု အမြိုးသားရေးကိစ်စဟာ ဗကပ တှကေ တူးတူးခါးခါး မလိုလားတဲ့ ကိစ်စပဲ။)
ကိုယျတို့လညျး ပွနျသာပွနျရတယျ၊ ကြောမလုံဘူး။ ဗကပတှကေို ပွောတယျ။ ငါတို့နောကျကိုတော့ လိုကျမတိုကျနဲ့လို့ . . . ။ သူတို့ကတော့ မတိုကျဘူးလို့ ပွောတာပေါ့လေ။ ဒါပမေဲ့ စိတျမခတြော့ ကရငျတှကေို မေးစမျးပွီး အကူအညီတောငျးတယျ။ ကရငျတှကေ ပွောတယျ။ သိပျတော့ စိတျမခရြဘူးဗြ။ ကြှနျတျောတို့ သုံးရကျလောကျတော့ အခြိနျတောငျးထားတယျ။ သုံးရကျအတှငျး ခငျဗြားတို့ ရောကျအောငျ ကြျောနိုငျပါ့မလား ဆိုတော့ ရအောငျကြျောရမှာပေါ့ဗြာ ဆိုပွီး ခရီး စထှကျခဲ့ကွတယျ။
ဆကျသှယျရေးသငျတနျး ပေးဖို့အတှကျ ထညျ့ပေးလိုကျတဲ့ ကရငျရဲဘျော နှဈယောကျလညျး ကိုယျတို့နဲ့ အတူ ပါလာတယျ။
ကိုယျတို့လညျး သုံးရကျအတှငျး ကြျောနိုငျအောငျတော့ ကွိုးစားတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ စိုးရိမျတဲ့အတျိုငး ဖွဈလာတော့တယျ။ ပုသိမျခရိုငျကနေ ရခိုငျအပွနျ ရခိုငျရိုးမအရှဘေ့ကျခွမျးတဈနရောမှာ ဗကပတှရေဲ့ လုပျကွံတိုကျခိုကျခွငျး ခံရတယျ။ ကရငျရဲဘျောနှဈယောကျ နဲ့ ရခိုငျရဲဘျောတဈယောကျ ကဆြုံးသှားတယျ။
ရခိုငျကှနျမွူနဈတှဖွေဈတဲ့အတိုငျး ကိုယျတို့ရဲ့ အမြိုးသားရေးရာမှာ တဈဘကျက အမြိုးသားရေး၊ နောကျတဈဘကျက ကှနျမွူနဈ အယူအဆနဲ့ ဖွဈနတောကိုး။ အမြိုးသားရေးစကားပွောမိလို့ ဗကပနဲ့ အဆငျမပွသေလို ကှနျမွူနဈအရောငျအသှေးကွောငျ့ ကရငျတှရေဲ့ မွငျပွငျးကတျခွငျးခံရတာတှကေိုလညျး ကွုံရဖူးတယျ။
သညျ့နောကျပိုငျး မဒတ အဖှဲ့ ဆိုတာကို ထောငျကွတယျ။ ဗကပတှေ မပါဘဲ ကရငျတှေ ဦးဆောငျပွီး ဗမာမပါ လူမြိုးပေါငျးစုံအဖှဲ့ ဖှဲ့ကွတာ။
ကိုယျတို့ဆီက ကိုရှသောကို ရကပ ကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ မဒတ ဆှေးနှေးပှဲ တကျဖို့ လှတျလိုကျတယျ။ ဟိုစဉျက ကအေငျ(နျ)ယူ အတှငျးရေးမှူး ဖွဈတဲ့ စောသနျးအောငျက ကိုရှသော နဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးအရ အရမျး ရငျးနှီးတယျ။ စောသနျးအောငျက ဖိတျလိုကျလို့ ကိုရှသော တကျလာတာပဲ။ ဒါပမဲ့ ကိုရှသော တဈယောကျ ခတောငျကြိုကျလိုကျ၊ တငျလုံးလိုကျ၊ ခှေးချေါလိုကျနဲ့ ဘာမှ အရာမရောကျ သေးခငျမှာ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီက ခိုငျမိုးလငျး သူ့ရှကေ့ ဝငျသှားပါလရေောဗြာ။
ကိုရှသောဟာ အဲသညျမှာ မှနျပွညျသဈပါတီနဲ့ စာခြုပျခြုပျနိုငျခဲ့တာတော့ မှနျပါရဲ့။ ဒါပမေဲ့ အဓိကအလုပျက မအောငျမွငျခဲ့ဘူး။ ဖွဈရတာက ဒီလို . . . ။ ကိုရှသောဟာ အစညျးအဝေးမှာ ကှနျမွူနဈ သဘောတရား စကားလုံးအကွီးကွီးတှကေို လကျသီးလကျမောငျးတနျးပွီး အတုံးလိုကျ အတဈလိုကျ ပွောပါသတဲ့။ ဒီတော့ ဗိုလျမွက အစညျးအဝေးမှာ သူ့ကို မကျြထောငျ့နီနီကွီးတှနေဲ့ လှမျးလှမျးကွညျ့ပါလရေော။ ဗိုလျမွက အဲသညျအခြိနျမှာ ဟိုလူ့ကို အစိုးရ သူလြှိုလို့ စှပျစှဲလိုကျ သတျလိုကျ၊ ဒီလူ့ကို သူလြှိုလို့ စှပျစှဲလိုကျ သတျလိုကျ လုပျနတောဆိုတော့ ဗိုလျမွ မကျြစောငျးထိုးတာကို ခံရတဲ့အခါ ကိုရှသောတဈယောကျ အူရော အသညျးတုနျ ရငျခုနျသှားပါသတဲ့။ ဒီတော့ ကိုရှသောတဈယောကျ ဝယျထားတဲ့ လကျနကျတှကေိုတောငျ သယျမလာနိုငျတော့ဘဲ မှနျပွညျသဈပါတီမှာပဲ ထားခဲ့ပွီး၊ ပုဆိုးမနိုငျ ပုဝါမနိုငျနဲ့ ရခိုငျကို အူယားဖားယား ပွနျပွေးလာတယျ။
ဒီတော့ ကိုရှသော ကိုယျစား ကိုယျသှားရတော့တာပေါ့။
ပထမဦးဆုံး မှနျပွညျသဈပါတီကို ကိုယျဝငျတှတေ့ယျ။ သူတို့က ကိုယျ့ကို ပွောတယျ။ အစညျးအဝေး တကျတဲ့ ကိစ်စကို ခငျဗြားအစီအစဉျနဲ့ ခငျဗြားလုပျစခေငျြတယျ။ ကြှနျတျောတို့က ခငျဗြားကို ကမကထ လုပျပေးတယျ ဆိုတာမြိုး မဖွဈခငျြဘူး။ ကရငျတှနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ ပွဿနာ မဖွဈစခေငျြဘူး လို့ဆိုကွတယျ။
ရတယျ၊ ကိစ်စမရှိဘူး လို့ပွောပွီး ဘကွီးလညျး ကိုယျ့လမျးကွောငျးနဲ့ ကိုယျသှားတယျ။ ကအေငျ(နျ)ယူ တပျမဟာ(၆) တပျမှူး ရှဆေိုငျးကနတေဈဆငျ့ သှားတယျ။ ရှဆေိုငျးရဲ့လကျထောကျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မူတူး ဆေးဖော က မယျလ (Maila) စခနျးအရောကျ ကိုယျ့ကို ကားမောငျးလိုကျပို့ပေးတယျ။
မယျလစခနျးမှာ လုပျတဲ့ သငျတနျးဆငျးပှဲ တဈခုမှာ ဗိုလျမွက မိနျ့ခှနျးလာပွောတယျ။ ကိုယျ အစညျးအဝေး တကျဖို့အရေးအတှကျ ကအေငျ(နျ)ယူ တှဲဖကျ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမောငျမောငျက ကိုယျ့ကို ဗိုလျမွနဲ့ မိတျဆကျပေးတယျ။ အဲဒီမှာတငျ ဗိုလျမွနဲ့ ကိုယျနဲ့ ကတောကျကဆဖွဈရတော့တာပါပဲ။
“ခငျဗြားကို ကြှနျတျောတို့ လကျမခံနိုငျဘူး။”
“ခငျဗြားတို့လူ ကိုရှသောလာတုနျးက ပေါကျကရတှေ ပွောသှားတယျ။ ဘာ . . . ညာ . . . နဲ့ ။ ယိုးဒယား အစိုးရက စိတျဆိုးတယျဗြ။ ယိုးဒယား အစိုးရက ဒါမြိုးတှေ မလိုလားဘူး ဗြ။”
“ကြှနျတျောတို့ အခု တျောလှနျရေးလုပျနကွေတာဟာ လူမြိုးကွီးဝါဒရဲ့ ဖိနှိပျမှုကို ခံနရေတဲ့ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုံ ရဲ့ လှတျမွောကျမှုအတှကျလား။ ဒါမှမဟုတျ ထိုငျးဘုရငျ့နိုငျငံတျောကို ကာကှယျ စောငျ့ရှောကျဖို့ အတှကျလား။”
ဗိုလျမွဟာ မကျြနှာကွီး ရဲတကျသှားပွီး ဒေါသလညျးထှကျလာတယျ။
သူလညျး ဒေါနဲ့မောနဲ့ ပွောတော့တာပါပဲ။
“ကြှနျတျောတို့က ဒီမှာ မှီခိုနကွေရတာဗြ” ဘာညာနဲ့ ပွောတော့တာပါပဲ။
ကိုယျကပွောပါတယျ။ သိပါတယျ၊ နားလညျပါတယျ . . . လို့ ။ ဘာပဲဆိုဆို တဈမြိုးတဈဖုံ နဲ့ နညျးလမျးရှာပွီး အဆငျပွအေောငျ လုပျရမှာပေါ့ လို့ပွောလိုကျတယျ။
“ဟာ . . . မဖွဈဘူး။ ခငျဗြားတို့ကို အစညျးအဝေး တကျခှငျ့မပွုနိုငျဘူး” လို့ သူက ပွောတယျ။
ဒီတော့ ကိုယျက . . . ဟုတျပွီဗြာ . . . ဆှေးနှေးသူ အနနေဲ့ မတကျဘူးဗြာ။ လလေ့ာသူ အနနေဲ့ ကြုပျတကျမယျ ဆိုတော့ ဗိုလျမွက “ဒီလိုဆိုရငျ ခငျဗြားတို့ လုံခွုံရေးကို ကြုပျတာဝနျမခံနိုငျဘူး” လို့ တငျးတငျးမားမာ ပွနျပွောတယျ။ ဒီလို အသကျ အန်တရယျ ခွိမျးခွောကျတဲ့စကား သူ့ပါးစပျက ထှကျလာတော့ ကိုယျတို့နှဈယောကျစလုံးရဲ့ ပတျဝနျးကငျြက လူတှေ အကုနျလုံးငွိမျကသြှားတယျ။ လူဝကွီး ဗိုလျမွက ယူနီဖောငျးအပွညျ့နဲ့ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ခါးထောကျပွီး ရပျနတေယျ။ ရငျဘတျပျေါမှာလညျး ဆုတံဆိပျတှေ အပွညျ့နဲ့။ ခါးမှာလညျး ပစ်စတို တဈလကျခြိတျလို့ . . . ။
အဲသလို တငျးတငျးမာမာဖွဈသှားကွစဉျမှာ ဗိုလျမောငျမောငျက အခွအေနကေို ဝငျထိနျးတယျ။ “အေးဗြာ . . . ကိုစံရှမေောငျ၊ ကြှနျတျောတို့ ဒီကိစ်စကို နောကျမှ အေးအေး ဆေးဆေး ဆှေးနှေးကွတာပေါ့ဗြာ။ အခုတော့ ဗိုလျခြုပျလညျး ခရီးထှကျစရာရှိသေးတယျ” ဘာညာနဲ့ ဝငျပွီး ဖွနျဖွလေိုကျတာပေါ့။
အခြုပျပွောရရငျ အဲဒီဒုတိယအစညျးအဝေးကို ကိုယျတကျခှငျ့မရခဲ့ဘူး။ မူတူးဆေးဖောက ကိုယျ့ကို ဒတျဆနျးကားလေး တဈစီးနဲ့ လာချေါတယျ။ မဲဆောကျကိုဖွတျပွီး ဘုရားသုံးဆူက ဦးသှငျအိမျကို လိုကျပို့တယျ။ (ထို မူတူးဆေးဖော မှာ KNU ၏ လကျရှိ အကွီးအကဲ မူတူးဆေးဖော ပငျ ဖွဈပါသညျ။)
ကရငျအငျအားစုတှေ၊ မှနျအငျအားစုတှနေဲ့ ဆကျဆံရေးလမျးကွောငျးတှအေပွငျ ထိုငျးကှနျမွူနဈပါတီနဲ့ပါ ဆကျဆံရေးလမျးကွောငျးတဈကွောငျး ဖောကျခဲ့သေးတယျ။
ကိုယျနဲ့ ကိုယျ့လူ ဆယျယောကျလောကျ ထိုငျးကှနျမွူနဈတှနေဲ့အတူ ခြုံခိုတိုကျပှဲတှမှော ပါဝငျဆငျနှဲခဲ့ကွတယျ။ သိမျးမိတဲ့ လကျနကျတှကေို ခှဲဝယေူကွတယျ။ သူတို့ကတော့ အမြားစုယူတာပေါ့။ ကိုယျတို့ကတော့ နညျးနညျးပဲ ရတာပေါ့လေ။
တဈခါက နယျခွားက ထိုငျးရဲစခနျးတဈခုကို ဝငျတိုကျကွတယျ။
ကိုယျတို့အဖှဲ့ကပဲ အနိုငျအရှုံး အဆုံးအဖွတျရအောငျ တိုကျသှားတာပါပဲ။ စခနျးက တောငျကုနျးပျေါမှာ။ ကိုယျတို့တဈတှကေ တောငျကုနျးရှဘေ့ကျ အောကျခွကေနေ တရှရှေ့တေ့ကျလာပွီး တိုကျတာ။ အပျေါကအကောငျတှကေ သူတို့အဝိုငျးခံနရေပွီဆိုတာကို သိပမေယျ့ လကျနကျမခဘြူး။
ဒါနဲ့ကိုယျက ပွောတယျ။ ကိုယျ့အုပျစုက စခနျးအနောကျဘကျ တောငျနံရံကို တှယျတကျပွီး အလဈဝငျတိုကျတယျလို့ . . . ။ ဒါနဲ့ အနောကျကနေ ပတျတကျကွတယျ။ မမြှျောလငျ့တဲ့နရောကနေ တကျလာပွီးပဈထညျ့လိုကျတော့ ထိုငျးရဲစခနျးထဲက လူတှေ တျောတျောမြားမြား ကကြုနျတယျ။
ဒါပမေဲ့ စခနျးအဆောကျအအုံထဲမှာ ခုခံနတေဲ့လူတှေ ရှိကွတုနျးပဲ။ အတငျးတကျပွီး ဝငျတိုကျရငျလညျး သူတို့ ပဈကှငျးထဲကနေ ဖွတျရမယျ။ အသအေပြောကျရှိမယျ။ ဒါပမေဲ့ အခြိနျက သိပျမပေးနိုငျတော့ဘူး။ ဒီအတိုငျးရှမေ့တိုးသာ တောကျမဆုတျသာ တနျ့နလေို့ကို မဖွဈတော့ဘူး။ ပွောကျကြားတှေ ဝငျတိုကျနကွေောငျးကို အနီးဆုံးမွို့က လတေပျစခနျးက သိသှားတာနဲ့ ကိုယျတို့ သကျသာမှာ မဟုတျဘူး။ လယောဉျနဲ့ လာပဈမှာ သခြောတယျ။
နောကျဆုံးတော့ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပွိး အတငျးဝငျတိုကျရတော့တာပါပဲ။
တခြို့က ကာပဈပဈနကွေတုနျးမှာ ကိုယျ့လူ လေးငါးယောကျက စခနျးကို ပွေးဝငျပွီးစိးနငျးကွတယျ။ ကံကောငျးခငျြတော့ အထဲမှာ အသကျရှငျနတေဲ့ ရနျသူ သုံးယောကျပဲ ကနျြတော့တာကို တှရေ့တယျ။ တဈယောကျပဲသနေတျကိုငျပွှး ပဈနနေိုငျတာ။ အဲဒီတဈယောကျကို ပဈသတျလိုကျတယျ။ လဲနတေဲ့ နှဈယောကျမှာ တဈယောကျက အခွအေနေ မကောငျးဘူး။ နောကျတဈယောကျကတော့ ပေါငျမှာ ကညျြထိထားတာ။
သူ့ရှကေို့ ရောကျလို့ ကိုယျက ဓါးမွောငျဆှဲထုတျတော့ သူက မသတျဖို့ တောငျးပနျတယျ။ တကယျတော့ ကိုယျက ဓါးမွောငျနဲ့ သူ့ဘောငျးဘီကို ခှဲပွီး ဒဏျရာကို စဈဆေးကွညျ့တာပါ။ သူ့ပေါငျထဲက ကညျြဆံကို ဆှဲထုတျပွီး၊ ဒဏျရာကို ပတျတီးလေးဘာလေး စညျးပေးခဲ့တယျ။ ဒဏျရာကို ဆေးကွောဖို့ အခြိနျမရတော့ဘူး။ လကျနကျတှကေို အကုနျသိမျးပွီး မွနျမွနျသှကျသှကျပဲ ဆုတျလာခဲ့ကွတယျ။ လကျနကျတှကေို ထိုငျး ကှနျမွူနဈတှနေဲ့ ခှဲဝယေူကွတာပေါ့။
ကိုယျတို့ စုဆောငျးရရှိသမြှ လကျနကျတှကေို ကိုခိုငျစိုးဆီအပျပွီး ရခိုငျကိုပို့ဖို့ စီစဉျရတယျ။ ဒါတောငျ တဈခါက ကရငျတှနေဲ့ ကိုယျတို့နဲ့ ကတောကျကဆဖွဈကွတော့ ကိုယျတို့လကျနကျတှကေို ကရငျတှကေ သိမျးသှားသေး တယျ။ နောကျတော့ပွနျရပါတယျ။
(စာရေးသူ ၏ မှတျခကျြ။ ။ ကရငျမြားက ရတပ အတှကျ လကျနကျ မြားကို အတိုငျးအတာ တဈခု အထိ ထောကျပံ့ပေးမညျ ဟု ကတိပေးပွီးသားရှိနရောမှ၊ ဦးစံရှမေောငျ၏ ပွဿနာ တဈခုကို အကွောငျးပွု၍ ကရငျမြားဘကျက ထိုသို့ လကျနကျထောကျပံ့ပေးရနျ အစီအစဉျကို ဖကျြသိမျးပဈခဲ့ဖူးသညျ ဟု အခွားသော ခတျေပွိုငျရငျးမွဈအခြို့က စာရေးသူအား ပွောပွသညျကို မှတျသားရဖူးပါသညျ။
ထိုအကွောငျးအခကျြ မှနျကနျမှုရှိမရှိကို ဘကွီး ဦးစံရှမေောငျ အသကျထငျရှားရှိစဉျ အတောအတှငျး စာရေးသူဘကျက မမေးမွနျး ဖွဈခဲ့သညျ့အတှကျ ဘကွီးအနဖွေငျ့ ငွငျးဆိုရနျ အခှငျ့အရေးကို မရရှိခဲ့ပါ။)
အပိုငျး (ခွောကျ) ကို ဆကျလကျ ဖတျရှုပါရနျ။
စံရွှေမောင် (သို့မဟုတ်) လက်နက်ချ ရကပ ကျားတစ်ကောင် (အပိုင်း-ငါး)
စစ်တွေ ၊ ၂၀ မေလ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ အခန်းဆက် အတ္ထုပတ္တိ ဆောင်းပါးရှည် ]
မိမိတို့ပါတီအတွက် လက်နက်ရဖို့၊ နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်တွေရဖို့ ကိုယ်အများကြီး စွန့်စွန့်စားစားနဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့လို့ ဘာမှ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အသက်ကို ပဓါန မထားဘဲ သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့တာ အမှန်ပဲ။
ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပဲပေါ့။
၁၉၆၃-ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းလောက်မှာ ဗကပ၊ ကေအင်(န်)ယူ တို့နဲ့ မဒညတ ပြန်လည်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ သွား ဆွေးနွေးကြတယ်။ (ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာ ကိုယ်မပါဖြစ်ခဲ့ဘူး။) မဒညတ ဆိုတာက ဗကပ အပါအ၀င် သူပုန်တွေ ပေါင်းပြီး ဖွဲ့ထားတာ။ အဲသည်မှာ ကိုယ်တို့ပါတီက တင်ပြတာကို ဗကပ က လုံးဝ လက်မခံဘူး။
ကိုယ်တို့တင်ပြတာက မဒညတ ကို ပြန်လည်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ လိုအပ်တယ်၊ သဘောတူညီချက် တွေထဲမှာ လူနည်းစု လူမျိုးစုတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် မပါသေးဘူး၊ လွတ်လပ်စွာခွဲထွက်ပိုင်ခွင့် အပါအ၀င် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်မူ ကို ကိုယ်တို့က တင်ပြတောင်းဆိုတယ်။ ဗကပ က လုံးဝ လက်မခံဘူး။ လက်မခံဘူး ဆိုတော့ ကိုယ်တို့ ပြန်တာပေါ့။ ဗကပတွေ ပြောတာက တိုးချဲ့ရေးကို လက်ခံတယ်၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးကို လက်မခံဘူး။ (လူနည်းစု အမျိုးသားရေးကိစ္စဟာ ဗကပ တွေက တူးတူးခါးခါး မလိုလားတဲ့ ကိစ္စပဲ။)
ကိုယ်တို့လည်း ပြန်သာပြန်ရတယ်၊ ကျောမလုံဘူး။ ဗကပတွေကို ပြောတယ်။ ငါတို့နောက်ကိုတော့ လိုက်မတိုက်နဲ့လို့ . . . ။ သူတို့ကတော့ မတိုက်ဘူးလို့ ပြောတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မချတော့ ကရင်တွေကို မေးစမ်းပြီး အကူအညီတောင်းတယ်။ ကရင်တွေက ပြောတယ်။ သိပ်တော့ စိတ်မချရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ သုံးရက်လောက်တော့ အချိန်တောင်းထားတယ်။ သုံးရက်အတွင်း ခင်ဗျားတို့ ရောက်အောင် ကျော်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတော့ ရအောင်ကျော်ရမှာပေါ့ဗျာ ဆိုပြီး ခရီး စထွက်ခဲ့ကြတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း ပေးဖို့အတွက် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ကရင်ရဲဘော် နှစ်ယောက်လည်း ကိုယ်တို့နဲ့ အတူ ပါလာတယ်။
ကိုယ်တို့လည်း သုံးရက်အတွင်း ကျော်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ် စိုးရိမ်တဲ့အတိုငး ဖြစ်လာတော့တယ်။ ပုသိမ်ခရိုင်ကနေ ရခိုင်အပြန် ရခိုင်ရိုးမအရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ဗကပတွေရဲ့ လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရတယ်။ ကရင်ရဲဘော်နှစ်ယောက် နဲ့ ရခိုင်ရဲဘော်တစ်ယောက် ကျဆုံးသွားတယ်။
ရခိုင်ကွန်မြူနစ်တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေးရာမှာ တစ်ဘက်က အမျိုးသားရေး၊ နောက်တစ်ဘက်က ကွန်မြူနစ် အယူအဆနဲ့ ဖြစ်နေတာကိုး။ အမျိုးသားရေးစကားပြောမိလို့ ဗကပနဲ့ အဆင်မပြေသလို ကွန်မြူနစ်အရောင်အသွေးကြောင့် ကရင်တွေရဲ့ မြင်ပြင်းကတ်ခြင်းခံရတာတွေကိုလည်း ကြုံရဖူးတယ်။
သည့်နောက်ပိုင်း မဒတ အဖွဲ့ ဆိုတာကို ထောင်ကြတယ်။ ဗကပတွေ မပါဘဲ ကရင်တွေ ဦးဆောင်ပြီး ဗမာမပါ လူမျိုးပေါင်းစုံအဖွဲ့ ဖွဲ့ကြတာ။
ကိုယ်တို့ဆီက ကိုရွှေသာကို ရကပ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ မဒတ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ဖို့ လွှတ်လိုက်တယ်။ ဟိုစဉ်က ကေအင်(န်)ယူ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်တဲ့ စောသန်းအောင်က ကိုရွှေသာ နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အရမ်း ရင်းနှီးတယ်။ စောသန်းအောင်က ဖိတ်လိုက်လို့ ကိုရွှေသာ တက်လာတာပဲ။ ဒါပမဲ့ ကိုရွှေသာ တစ်ယောက် ခတောင်ကျိုက်လိုက်၊ တင်လုံးလိုက်၊ ခွေးခေါ်လိုက်နဲ့ ဘာမှ အရာမရောက် သေးခင်မှာ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီက ခိုင်မိုးလင်း သူ့ရှေ့က ၀င်သွားပါလေရောဗျာ။
ကိုရွှေသာဟာ အဲသည်မှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာတော့ မှန်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အဓိကအလုပ်က မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဖြစ်ရတာက ဒီလို . . . ။ ကိုရွှေသာဟာ အစည်းအဝေးမှာ ကွန်မြူနစ် သဘောတရား စကားလုံးအကြီးကြီးတွေကို လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ပြောပါသတဲ့။ ဒီတော့ ဗိုလ်မြက အစည်းအဝေးမှာ သူ့ကို မျက်ထောင့်နီနီကြီးတွေနဲ့ လှမ်းလှမ်းကြည့်ပါလေရော။ ဗိုလ်မြက အဲသည်အချိန်မှာ ဟိုလူ့ကို အစိုးရ သူလျှိုလို့ စွပ်စွဲလိုက် သတ်လိုက်၊ ဒီလူ့ကို သူလျှိုလို့ စွပ်စွဲလိုက် သတ်လိုက် လုပ်နေတာဆိုတော့ ဗိုလ်မြ မျက်စောင်းထိုးတာကို ခံရတဲ့အခါ ကိုရွှေသာတစ်ယောက် အူရော အသည်းတုန် ရင်ခုန်သွားပါသတဲ့။ ဒီတော့ ကိုရွှေသာတစ်ယောက် ၀ယ်ထားတဲ့ လက်နက်တွေကိုတောင် သယ်မလာနိုင်တော့ဘဲ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှာပဲ ထားခဲ့ပြီး၊ ပုဆိုးမနိုင် ပုဝါမနိုင်နဲ့ ရခိုင်ကို အူယားဖားယား ပြန်ပြေးလာတယ်။
ဒီတော့ ကိုရွှေသာ ကိုယ်စား ကိုယ်သွားရတော့တာပေါ့။
ပထမဦးဆုံး မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ကိုယ်ဝင်တွေ့တယ်။ သူတို့က ကိုယ့်ကို ပြောတယ်။ အစည်းအဝေး တက်တဲ့ ကိစ္စကို ခင်ဗျားအစီအစဉ်နဲ့ ခင်ဗျားလုပ်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားကို ကမကထ လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူး။ ကရင်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြဿနာ မဖြစ်စေချင်ဘူး လို့ဆိုကြတယ်။
ရတယ်၊ ကိစ္စမရှိဘူး လို့ပြောပြီး ဘကြီးလည်း ကိုယ့်လမ်းကြောင်းနဲ့ ကိုယ်သွားတယ်။ ကေအင်(န်)ယူ တပ်မဟာ(၆) တပ်မှူး ရွှေဆိုင်းကနေတစ်ဆင့် သွားတယ်။ ရွှေဆိုင်းရဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မူတူး ဆေးဖော က မယ်လ (Maila) စခန်းအရောက် ကိုယ့်ကို ကားမောင်းလိုက်ပို့ပေးတယ်။
မယ်လစခန်းမှာ လုပ်တဲ့ သင်တန်းဆင်းပွဲ တစ်ခုမှာ ဗိုလ်မြက မိန့်ခွန်းလာပြောတယ်။ ကိုယ် အစည်းအဝေး တက်ဖို့အရေးအတွက် ကေအင်(န်)ယူ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မောင်မောင်က ကိုယ့်ကို ဗိုလ်မြနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဲဒီမှာတင် ဗိုလ်မြနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။
“ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူး။”
“ခင်ဗျားတို့လူ ကိုရွှေသာလာတုန်းက ပေါက်ကရတွေ ပြောသွားတယ်။ ဘာ . . . ညာ . . . နဲ့ ။ ယိုးဒယား အစိုးရက စိတ်ဆိုးတယ်ဗျ။ ယိုးဒယား အစိုးရက ဒါမျိုးတွေ မလိုလားဘူး ဗျ။”
“ကျွန်တော်တို့ အခု တော်လှန်ရေးလုပ်နေကြတာဟာ လူမျိုးကြီးဝါဒရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို ခံနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုံ ရဲ့ လွတ်မြောက်မှုအတွက်လား။ ဒါမှမဟုတ် ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက်လား။”
ဗိုလ်မြဟာ မျက်နှာကြီး ရဲတက်သွားပြီး ဒေါသလည်းထွက်လာတယ်။
သူလည်း ဒေါနဲ့မောနဲ့ ပြောတော့တာပါပဲ။
“ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ မှီခိုနေကြရတာဗျ” ဘာညာနဲ့ ပြောတော့တာပါပဲ။
ကိုယ်ကပြောပါတယ်။ သိပါတယ်၊ နားလည်ပါတယ် . . . လို့ ။ ဘာပဲဆိုဆို တစ်မျိုးတစ်ဖုံ နဲ့ နည်းလမ်းရှာပြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ရမှာပေါ့ လို့ပြောလိုက်တယ်။
“ဟာ . . . မဖြစ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကို အစည်းအဝေး တက်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး” လို့ သူက ပြောတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်က . . . ဟုတ်ပြီဗျာ . . . ဆွေးနွေးသူ အနေနဲ့ မတက်ဘူးဗျာ။ လေ့လာသူ အနေနဲ့ ကျုပ်တက်မယ် ဆိုတော့ ဗိုလ်မြက “ဒီလိုဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ လုံခြုံရေးကို ကျုပ်တာဝန်မခံနိုင်ဘူး” လို့ တင်းတင်းမားမာ ပြန်ပြောတယ်။ ဒီလို အသက် အန္တရယ် ခြိမ်းခြောက်တဲ့စကား သူ့ပါးစပ်က ထွက်လာတော့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ အကုန်လုံးငြိမ်ကျသွားတယ်။ လူဝကြီး ဗိုလ်မြက ယူနီဖောင်းအပြည့်နဲ့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ခါးထောက်ပြီး ရပ်နေတယ်။ ရင်ဘတ်ပေါ်မှာလည်း ဆုတံဆိပ်တွေ အပြည့်နဲ့။ ခါးမှာလည်း ပစ္စတို တစ်လက်ချိတ်လို့ . . . ။
အဲသလို တင်းတင်းမာမာဖြစ်သွားကြစဉ်မှာ ဗိုလ်မောင်မောင်က အခြေအနေကို ၀င်ထိန်းတယ်။ “အေးဗျာ . . . ကိုစံရွှေမောင်၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စကို နောက်မှ အေးအေး ဆေးဆေး ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်လည်း ခရီးထွက်စရာရှိသေးတယ်” ဘာညာနဲ့ ၀င်ပြီး ဖြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့။
အချုပ်ပြောရရင် အဲဒီဒုတိယအစည်းအဝေးကို ကိုယ်တက်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ မူတူးဆေးဖောက ကိုယ့်ကို ဒတ်ဆန်းကားလေး တစ်စီးနဲ့ လာခေါ်တယ်။ မဲဆောက်ကိုဖြတ်ပြီး ဘုရားသုံးဆူက ဦးသွင်အိမ်ကို လိုက်ပို့တယ်။ (ထို မူတူးဆေးဖော မှာ KNU ၏ လက်ရှိ အကြီးအကဲ မူတူးဆေးဖော ပင် ဖြစ်ပါသည်။)
ကရင်အင်အားစုတွေ၊ မွန်အင်အားစုတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတွေအပြင် ထိုင်းကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပါ ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်း ဖောက်ခဲ့သေးတယ်။
ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်လူ ဆယ်ယောက်လောက် ထိုင်းကွန်မြူနစ်တွေနဲ့အတူ ချုံခိုတိုက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်။ သိမ်းမိတဲ့ လက်နက်တွေကို ခွဲဝေယူကြတယ်။ သူတို့ကတော့ အများစုယူတာပေါ့။ ကိုယ်တို့ကတော့ နည်းနည်းပဲ ရတာပေါ့လေ။
တစ်ခါက နယ်ခြားက ထိုင်းရဲစခန်းတစ်ခုကို ၀င်တိုက်ကြတယ်။
ကိုယ်တို့အဖွဲ့ကပဲ အနိုင်အရှုံး အဆုံးအဖြတ်ရအောင် တိုက်သွားတာပါပဲ။ စခန်းက တောင်ကုန်းပေါ်မှာ။ ကိုယ်တို့တစ်တွေက တောင်ကုန်းရှေ့ဘက် အောက်ခြေကနေ တရွေ့ရွေ့တက်လာပြီး တိုက်တာ။ အပေါ်ကအကောင်တွေက သူတို့အ၀ိုင်းခံနေရပြီဆိုတာကို သိပေမယ့် လက်နက်မချဘူး။
ဒါနဲ့ကိုယ်က ပြောတယ်။ ကိုယ့်အုပ်စုက စခန်းအနောက်ဘက် တောင်နံရံကို တွယ်တက်ပြီး အလစ်ဝင်တိုက်တယ်လို့ . . . ။ ဒါနဲ့ အနောက်ကနေ ပတ်တက်ကြတယ်။ မမျှော်လင့်တဲ့နေရာကနေ တက်လာပြီးပစ်ထည့်လိုက်တော့ ထိုင်းရဲစခန်းထဲက လူတွေ တော်တော်များများ ကျကုန်တယ်။
ဒါပေမဲ့ စခန်းအဆောက်အအုံထဲမှာ ခုခံနေတဲ့လူတွေ ရှိကြတုန်းပဲ။ အတင်းတက်ပြီး ၀င်တိုက်ရင်လည်း သူတို့ ပစ်ကွင်းထဲကနေ ဖြတ်ရမယ်။ အသေအပျောက်ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်က သိပ်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ ဒီအတိုင်းရှေ့မတိုးသာ တောက်မဆုတ်သာ တန့်နေလို့ကို မဖြစ်တော့ဘူး။ ပြောက်ကျားတွေ ၀င်တိုက်နေကြောင်းကို အနီးဆုံးမြို့က လေတပ်စခန်းက သိသွားတာနဲ့ ကိုယ်တို့ သက်သာမှာ မဟုတ်ဘူး။ လေယာဉ်နဲ့ လာပစ်မှာ သေချာတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြိး အတင်းဝင်တိုက်ရတော့တာပါပဲ။
တချို့က ကာပစ်ပစ်နေကြတုန်းမှာ ကိုယ့်လူ လေးငါးယောက်က စခန်းကို ပြေးဝင်ပြီးစိးနင်းကြတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ အထဲမှာ အသက်ရှင်နေတဲ့ ရန်သူ သုံးယောက်ပဲ ကျန်တော့တာကို တွေ့ရတယ်။ တစ်ယောက်ပဲသေနတ်ကိုင်ပြှး ပစ်နေနိုင်တာ။ အဲဒီတစ်ယောက်ကို ပစ်သတ်လိုက်တယ်။ လဲနေတဲ့ နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က အခြေအနေ မကောင်းဘူး။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ပေါင်မှာ ကျည်ထိထားတာ။
သူ့ရှေ့ကို ရောက်လို့ ကိုယ်က ဓါးမြောင်ဆွဲထုတ်တော့ သူက မသတ်ဖို့ တောင်းပန်တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်က ဓါးမြောင်နဲ့ သူ့ဘောင်းဘီကို ခွဲပြီး ဒဏ်ရာကို စစ်ဆေးကြည့်တာပါ။ သူ့ပေါင်ထဲက ကျည်ဆံကို ဆွဲထုတ်ပြီး၊ ဒဏ်ရာကို ပတ်တီးလေးဘာလေး စည်းပေးခဲ့တယ်။ ဒဏ်ရာကို ဆေးကြောဖို့ အချိန်မရတော့ဘူး။ လက်နက်တွေကို အကုန်သိမ်းပြီး မြန်မြန်သွက်သွက်ပဲ ဆုတ်လာခဲ့ကြတယ်။ လက်နက်တွေကို ထိုင်း ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ ခွဲဝေယူကြတာပေါ့။
ကိုယ်တို့ စုဆောင်းရရှိသမျှ လက်နက်တွေကို ကိုခိုင်စိုးဆီအပ်ပြီး ရခိုင်ကိုပို့ဖို့ စီစဉ်ရတယ်။ ဒါတောင် တစ်ခါက ကရင်တွေနဲ့ ကိုယ်တို့နဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်ကြတော့ ကိုယ်တို့လက်နက်တွေကို ကရင်တွေက သိမ်းသွားသေး တယ်။ နောက်တော့ပြန်ရပါတယ်။
(စာရေးသူ ၏ မှတ်ချက်။ ။ ကရင်များက ရတပ အတွက် လက်နက် များကို အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ထောက်ပံ့ပေးမည် ဟု ကတိပေးပြီးသားရှိနေရာမှ၊ ဦးစံရွှေမောင်၏ ပြဿနာ တစ်ခုကို အကြောင်းပြု၍ ကရင်များဘက်က ထိုသို့ လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးရန် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့ဖူးသည် ဟု အခြားသော ခေတ်ပြိုင်ရင်းမြစ်အချို့က စာရေးသူအား ပြောပြသည်ကို မှတ်သားရဖူးပါသည်။
ထိုအကြောင်းအချက် မှန်ကန်မှုရှိမရှိကို ဘကြီး ဦးစံရွှေမောင် အသက်ထင်ရှားရှိစဉ် အတောအတွင်း စာရေးသူဘက်က မမေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက် ဘကြီးအနေဖြင့် ငြင်းဆိုရန် အခွင့်အရေးကို မရရှိခဲ့ပါ။)
အပိုင်း (ခြောက်) ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါရန်။
(intro) ရဲနီ စံရှမေောငျ ၏ ဖွတျသနျးမှုမြား
၁။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-တဈ)
၂။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-နှဈ)
၃။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-သုံး)
၄။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-လေး)
၅။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-ငါး)
၆။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-ခွောကျ)
၇။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီစံရှမေောငျ (အပိုငျး-ခုနဈ)
၈။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီစံရှမေောငျ (အပိုငျး-ရှဈ)
၉။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီစံရှမေောငျ (အပိုငျး-ကိုး)
၁၀။ ရကပလကျဟောငျး ရဲနီစံရှမေောငျ (အပိုငျး-တဈဆယျ)
၁၁။ ရိုဟငျဂြာမကျြနှာဖုံးအောကျမှ “အာကစ်စတနျ”
U San Shwe Maung
Previous ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-လေး)
Next ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-ခွောကျ)